“ABO”n Kaayyoo Ummata Oromoo Malee, Hayyama Daldalaa Miti.
SEENAA Y.G (2005):
Addi Bilisummaa Oromoo bu’aa ba’ii Ulfaataa fi Daandii dheeraa keessa dabree har’a ga’uuf, Wareegama Ilmaan Oromoo qaqqaalii nu gaafateera. Wareegamni qaqqaaliin kafalaman, har’a ga’uu “ABO” kan nuuf mirkaneessu qofa osoo hin taanee, Kaayyoo isaa akka galmaan ga’u illee nu dhugeessa. Har’a seenaa ABOn keessa dabree hundeessitootaa fi warra lubbuu fi jireenya isaanii wareeganii isa jiraachisan irraa kan gaafannu hin qabnu. Seenaa fi Kaayyoon ABO yoo xiqqaate dhaloota sadii keessa jiraachuun hin shakkisiisu. Kun firaaf gammachuu, diinaaf yaaddoodha. Kana jechuun ammoo, shiroonni diinaa kan yeroof nu dura dhaabbatan malee, Qabsoo keenya dhabamsiisuuf abjootan san, kan dhugeessu akka hin taanee nu dhugeessa. Dhalooti tokko ABO hundeesse hanga har’aatti waliin jira. Dhalooti itti aanu Kaayyoo isaanii ofitti fudhatee waliin hiriiree jira. Dhalooti isaan boodaa Kaayyoo kana dhaloota Qubeetti ceesisee keessaa fi alaan dhikkifannaa onnee diinaa ol kaasee, taa’uu fi ka’uu wallaalchisaa jira. Dhalooti Arfaffaan wareegama obbolaansaa kafalaa jiran ilaalee, duuba isaanii hiriiruu irraa, Umurii waggaa 10tti rasaasa wayyaaneen dhangala’aa jiran.
Mata duree kiyya har’aa keessaa akka hin baaneef, Wareegamuu Obbolaa keenyaa, Abbootii keenyaa fi haadhoolii keenyaa lakkaa’aa jiru kun, Ega ABOn hundeeffamee malee, Kan Bara Gabrummaa Jalatti kufnee kaasee akka hin taanee naaf hubadhaa. Gabaabaatti ABOn kaayyoo Ummata Oromoo ta’uu irraa wareegamni Lubbuu, wareegamni Qabeenyaa, Wareegamni Beekumsaa, Wareegamni Maallaqaa … itti baafne, akka salphaatti kan dubbatamuu miti. barruu gabaabaa kana keessatti dhiheessufuu rakkisaadha. Bara Gabarummaa jalatti kufnee kaafnee falmaa gaggeessaa jirruun, Lubbuu Ilmaan Oromoo Miliyoona 5 olii wareegamuu seenaatu dubbata. Qabeenyaa kana hin jedhamne dhabneerra. Bara Gabrummaa waggoota dheeraa kana keessaa kan akka bara wayyaanee Lubbuu fi Qabeenyaa itti dhabaa jirru hin jiru. Wareegamni baasaa jirru kun, ABO hunddeessuu eegalee hanga har’aatti wareegama waa hundaa nu gaafataa jira. Dhaaba Kaayyoo Ummata Oromoo bakkaan ga’uuf dhama’aa jiru kana waliin Ummati Oromoo hiriiree wareegama kana caalu kafaluuf akka jiru shakkiin hin jiru.
ABOn bu’aa ba’ii hedduu keessa dabree har’a ga’uuf gumaachi Ummata isaa fi Qabsaa’oonni isaa baasan, Seenaa Ummatichaa keessatti isa ol aanaa ta’uu isaa akka galmeesse jiru mamiin hin jiru. shirri diinaa yeroo isa laaffisuuf foolatuu fi dhiigumti isaa isa ganee isa dhabamsiisuuf yennaa wixifatu,Obsaa fi murannoon keessa dabree sadarkaa har’a irra jiru irra ga’eera. ABOn waan keessa dabre irra dhaabbatee, Qabsoo Ummata Oromoo isa maayyiif hojjachaa jiraachuu kan dhugaa hubateetu dhugeeffata. Har’a ABOn Kaayyoo Ummata kanaa malee, Hayyama daldalaa Siyaasaaf abbaan fedhe butatee fiigu akka hin taanee, Qabsaa’oonni dhugaa mirkaneessaa jiran. Kaayyoo kaleessa akka malee adda ba’e, bifa deebi’ee rakkoo hin seenneen gadi dhaabuuf, irratti hojjatamaa jiraachuun Ummata kanaaf gammachuudha.
ABOn waraqaa eenyummaa dhuunfaa qabatanii ittin of-himan miti. ABO fi Kaayyoon isaa Alaabaa mirmirsaa fiiguu irra jabaata. ABO fi Kaayyoon isaa, miira Maqaa fi Alaabaa isaaf qabnuun qofaa isa jiraachisuu hin dandeenyu. Alaabaanis ta’uu Kaayyoon isaa Gonkumaa diinaa fi Nafxanyotattis kan maxxanu mitii, kan wal bira dhaabbatanu miti. Alaabaa Mirmirsaa fiiguuf yoo ta’e, Halagaanuu ykn wayyaaneenuu nu basaasuuf Biyya keessaa fi alatti qabattee fiigaa jirti. Ijoo dubbiin, Alaabaa Baatanii fiiganii fi Kaayyoo sanaaf wareegama barbaachisu ni kafaluudha? Kana malees, Alaabaa fi Kaayyoo sana saammatanii bobaa halgaa jalatti fiiguun, Kaayyoo sana dhugeessuu ni ta’aa? Ummata ofiin kana dura qabnee gawwamsina jedhanii yaaduun fayyummaadhaa?
ABOn Daldaluun dhaabbachuu qaba. dhalli Oromoo kamuu Mirga Abbaa Biyyuummaa Ummata Oromoo mirkaneessuuf, walaba ta’ee Maqaa barbaade Moggaafatee qabsaa’uun mirga isaati. Dubbin jiru Maqaa irraa miti. bu’aa Ummata kanaaf argamsiisu irratti hundaa’a. Ummata Ofii tuffatanii, Halagaa kabajuuf arreedduun of saaxiluudha. Kaayyoo Lammiileen keenya kumaantamaan itti wareegaman salphifnee, kaayyoo halgaa ykn nafxanyaa galmaan ga’uuf arreeduun dhuguma lammii ofiif yaaduudhaa? Ummata Qabsoofnaaf jedhan hanga kana gadi buusanii diina biratti tuffachiisuun namummaa irraa maddaa?
Ummati Oromoo Biyya keessaa fi ala jiru, ABOn hayyama Daldalaa akka hin taanee bakka jiru maratti qalbii dhabdoota akeekuu qaba. Mooraa Qabsoo Qulqulleessuuf sochi itti jiramu cinaa dhaabbachuun, seenaa salphinaa kana of keessaa dhabamsiisuu qabna. ABOn Abbaa Qaba. ABOn halagaaf jedhee hin gurmoofne. Halagaadhaanis hin dhaabbanne. Daboos kadhatee hin ijaaramne. ABO jiraachisuun galma ga’ee, Tikifachuutti ce’aa jirraa ABO Dhugaaf haa falmannu. ABO Forjidii mooraa Minilik keessatti of himaa jiruun dhaabbadhu haa jennu. Beektoonni, Hayyoonni, Qabsaa’oonni, Gaazexessitoonni, beektoonni Seenaa, hundi keenya ABO Oromiyaatti dhalate malee, ABO mana Walattee keessatti dhalate hin beeknu jedhaa raga ba’aa! saamichi maqaa Seenaa fi Aadaa Oromoo keessatti, akkamiin ilaalama? Seenaan yeroo jal’atuu fi dhiitamu maaf callifnee ilaalla? Isa karaa haqaa irra jiruuf ragaa ba’uu, isa dantaaf jedhee dabarsee nu kennu ifatti itti himuu maa sodaanna? ABO tokkicha dhugeessuuf tokko wareegama baasaa kaan kana dabsuuf maaf akka dhama’u hayyamnaaf? ABOn Kaayyoo Ummata Oromooti malee, Hayyama daldalaa miti. Dantaa Ummata Oromoo kanachiisuuf malee, Dantaa dhuunfaa kachiisuuf hin dhalanne. ABO OROMIYAATTI DHALATTE MALEE, BIYYA ALAATTI UDDELLAMTEE HIN FEENU. Kun muree guutooti. GALATOOMAA!